Nigranee | » बलात्कारको घटना सार्वजनिक गर्छु भनेपछि हत्या ! बलात्कारको घटना सार्वजनिक गर्छु भनेपछि हत्या ! – Nigranee
बलात्कारको घटना सार्वजनिक गर्छु भनेपछि हत्या !
निगरानी संवाददाता March 19, 2020 93
इलाम : इलाम सूर्योदय नगरपालिकाकी १७ वर्षीया आकृती राईलाई स्थानीय एक युवाले बलात्कारपछि हत्या गरेको खुलेको छ ।
राईको हत्या गर्ने छिमेकी रोशन राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले पत्रकार सम्मेलन गरेर हत्याका आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
बुधबार क्षतविक्षत अवस्थामा आकृतीको सव फेला परेको थियो । आमाले अर्कैसँग विवाह गरेपछि बिरामी बाबुको हेरचाह गर्दै बसेकी आकृतीको मृत्युपछि बाबु विछिप्त जस्तै भएको स्थानीय दुर्गा पोखरेल बताउँछन् । अन्नपूर्णबाट